ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ လယ်ယာလုပ်ငန်းတွေအတွက် အဆင်ပြေလာစေသည့်တရုတ် ဒရုန်းများ - Xinhua News Agency
ယူနန်၊ သြဂုတ် ၂၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံး ဒရုန်းများကို ကွမ်ကျိုး အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီ မှတီထွင်ထုတ်လုပ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကွမ်တုန်းပြည်နယ် တွင် ကောက်ပဲသီးနှံများကိုစစ်ဆေးရန် ၊ ရာသီဥတုအခြေအနေများကို စစ်ဆေးရန် ၊ တောင်သူများ မည်သည့်အချိန် ပျိုးကြဲသင့်သည် ဆိုများကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် ၊ မည်သည့်နေရာများကို ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းရန်နှင့် စိုက်ခင်းတွင် လိုအပ်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပေးရန်အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံပြုလျက်ရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံး XAG ဒရုန်း ၆၆,၀၀၀ ကို နိုင်ငံပေါင်း ၄၂ နိုင်ငံရှိ ဒေသများတွင်းအသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ (Xinhua)
Chinese drones facilitate smart farming worldwide
Agricultural drones developed byaGuangzhou-based company in South China’s Guangdong Province are being widely used to analyse crop growth and climate conditions, helping farmers make data-driven decisions on when to seed, where to spray, and how much input is required. There have been more than 66,000 XAG unmanned agricultural devices put into operation across 42 countries and regions.
ဟားနီ လှေကားထစ် စပါး စိုက်ခင်းများ
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ ဆိုလာပြားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း